संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्नहरू- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अहिले गाउँतिर आफ्नै घरको ‘भकारी’ भर्नेभन्दा पनि बजार भर्ने उत्पादनमा जोड दिन थालिएको छ । छिट्टै नगद हात त पर्छ तर भकारी रित्ता हुन्छन् । बजारमुखी हुन थालेपछि खानेकुरा जोहो गर्ने परम्परागत रैथाने ज्ञान हराए ।
वैशाख ६, २०७७ प्रेम फ्याक
कोरोना भाइरसले केही महिनादेखि सारा विश्वलाई नै ठप्प बनाएको छ । आम मानवजातिले यसरी बन्दाबन्दीमा बस्नुपर्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन । यसले हाम्रो दिमाग, पाइला र भावनालाई बाँधेको छ ।
यो भाइरसले सबै जाति, वर्ग, लिंग र भूगोललाई असर पारेको छ ।यसका सामाजिक, मानसिक, आर्थिक र राजनैतिक असर बहुआयमिक र दीर्घकालीन हुनेछन् ।तर, ढिलोचाँडो यो महामारीले आफ्नो बाटो लेला । तर, उत्तर–कोरोना मानवजीवन कष्टकर हुन सक्छ ।
वैज्ञानिकहरू भाइरससँग लड्न चाहिने खोप र अन्य औषधि निर्माणमा जुटेका छन् । अर्थशास्त्रीहरू विश्व अर्थतन्त्रबारे विश्लेषण गर्दैछन् । समाज/मानवशास्त्रीहरू यसले समाज तथा आममानवजाति, मुख्यगरीनिम्न आय भएका र स्रोत–साधनमा पहुँच नहुने वर्ग र समुदायमा पार्ने असरबारे छलफल गर्दैछन् । शिक्षाविद्हरू कसरी पढ्ने र पढाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । यी छलफलमा टेक्दै प्रस्तुत लेखमा हामीले स्वीकार गर्दै आएको ज्ञानमीमांसाको सान्दर्भिकतालाई यो महामारीले कसरी चुनौती दिएको छ भन्ने सवालमाथिविमर्श गर्ने कोसिस गरेको छु ।
नवउदारवादको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न
कोरोनाभाइरस रोक्न शक्तिशाली राष्ट्र पनि किन असक्षम भए ?उत्तर खोज्न सजिलो छैन । यसमा मेडिकल र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभिन्न तर्क होलान् । तर, यो महामारी यति बढी फैलनु र शक्तिशाली हुनुमा हामीले स्वीकारगर्दै आएको मानव तथा समाजविकास र राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित चिन्तन र ज्ञान मुख्य रूपले जिम्मेवार छ । अहिले विश्व अर्थ–राजनीति र विकासका भाष्य र योजनामा नवउदारवादी चिन्तन र त्यसले उत्पादनगरेका ज्ञानको प्रभुत्व छ । विद्वान् डेभिड हार्भीका अनुसार, यो चिन्तनले खुला बजार र निजीकरणको वकालत गर्नुका साथै मानव विकाससँग सम्बधित सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून वा हुनुहुँदैन भन्ने तर्क अघि सार्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई निजीकरण गर्दा व्यक्ति, समाज र समग्र देशको विकास गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने चिन्तनबाट राज्य निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने तर्क नवउदारवादले गर्छ । यो तर्क र यससँग जोडिएका ज्ञानहरूले राज्यको भूमिकालाई खुम्च्याउँछ । राज्यले वातावरण बनाइदिने मात्र हो, अरू तमाम काम खुला बजारले गर्छ भन्ने चिन्तनका साथ नवउदारवादी ज्ञानमीमांसाले राज्यका नीति र संरचनालाई जनतामुखीभन्दा पनि बढी बजारकेन्द्रित बनाउनमा जोड दिन्छ । आमनागरिकसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सेवाहरूमा राज्यको लगानी घटाउँदै लैजाने र निजी लगानीलाई बढाउने नीति अख्तियार गर्न जो चिन्तनले जोड दिन्छ ।
आर्थिक र राजनीतिक रूपले ‘शक्तिशाली’ भनिएका तर नवउदारवादी ज्ञान हावी भएका युरोपियन र उत्तर अमेरिकन मुलुकहरूलाई यो महामारीसँग लड्न हम्मेहम्मे भइसकेको छ । यसलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने कुनै उपाय निक्लेको छैन । । उनीहरूको सारा शक्तिले किन काम गरिरहेको छैन ? मेडिकल विज्ञानले मात्रै यसको उत्तर दिन सक्दैन । उत्तरका लागि हामीले स्वीकार गर्दै आएको मानव र समाज विकाससम्बन्धी ज्ञान र तिनीहरूले बनाएका आम धारणाको सान्दर्भिकतामाथि निर्मम रूपमा प्रश्न गर्न जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि ‘डिमक्रसी एट वर्क’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा अर्थशास्त्र, मनावशास्त्र र भूगोलसम्बन्धी लामो अध्ययन गरेका विद्वान् डेभिड हार्भीले नवउदारवादी सोच र ज्ञानले कोरोनाभाइरसजस्ता महामारी रोक्न नसकिने तर्क गर्छन् ।
यस्तो बेला राज्यहरूले विश्वासगरेको खुला बजारमा एउटा प्याज, आलु, मास्क र अन्य दैनिक जीवनका आवश्यक आधारभूत वस्तु अभाव भएपछि महामारीसँग लड्न नसकिने तर्क गर्छन् उनी । नवउदारवादी उपभोक्तावादको आलोचना गर्दै हार्भी तर्क गर्छन्, ‘यो भाइरसले राज्यहरूले अहिलेसम्म स्वीकार गर्दै आएका नवउदारवादले निर्माणगरेका उपभोगका शैली र अर्थ–व्यवस्थालाई आक्रमण गरेको छ ।’ यसले नवउदारवादी ज्ञान र शासकीय सोच तथा संरचनाहरू आम मानव–जातिको विकास, शान्ति र समृद्धिको लागि सान्दर्भिक छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।
मानव र समाजभन्दापनि ‘नाफा’लाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको नवउदारवादले हाम्रा राज्य र तिनका शासकीय शक्तिलाई कसरी कमजोर छ भन्नेसोच्न यो भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई अवसर दिएको छ । आफूसँग भएका सारा आर्थिक, प्राविधिक ज्ञान र शक्ति लगाउँदा पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरूनिरीहजस्तै छन् । उपायको खोजी नभएका होइनन्, तर ती पर्याप्त छैनन् । यसै सन्दर्भमा विश्व–राजनीतिका विश्लेषक तथा भाषाशास्त्री नोम चोम्स्कीले नवउदारवादी शासकीय सोच र प्रविधि तथा ज्ञानले अमेरिकाले कोरोना भाइरससँग लड्न नसकेको तर्क अघि सार्छन् । उनी स्वास्थ्य, औषधि र अन्य उपकरण बजारको हातमा गएपछि नाफा–घाटाको अंकगणितमै समय बित्ने र ठूला कम्पनीले महामारीको तयारी नगरेर अति आवश्यक वस्तुको अभाव भएको तर्क अघि सार्छन् ।
नेपालमा पनि केही दशकयता नवउदारवादी ज्ञान र चिन्तन हावी भएको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवामा निजीकरण हावी छ । यसले झट्ट हेर्दा राज्य र आम मानवजातिको विकासमा सहयोग गरेकै देखिन्छ । तर, यस्ता नीतिले अन्तत: ‘नाफा–घाटा’, ‘प्रतिस्पर्धा’ र ‘विनियमन’जस्ता नवउदारवादी ज्ञान र चिन्तनलाई प्रोत्साहन गर्छन् । मानव जीवनभन्दा नाफा ठूलो भएपछि, यस्ता महामारीको बेला राज्यको काम आफ्नै जनताको लास हेर्ने दर्शक हुनुबाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन ।
मानव: एक बजारिया वस्तु?
जब राज्यहरू बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्छु भन्ने चिन्तनबाट सञ्चालित हुन्छन्, तब जनताको पहिचान एक बजारिया वस्तुमात्रै हुनपुग्छ्र । जनताको संस्कार, ज्ञान र चिन्तन बजारले निर्धारण गर्छ । के खाने, कता खाने र कसरी खाने निर्णय बजारले गर्छ । कुन भाषा बोल्ने, के लुगा लगाउने र कस्तो व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नेजस्ता हाम्रा दैनिक क्रियाकलापमा बजारको शक्ति हावी हुन्छ । मुख्यत: हामीले निर्माण गर्ने ज्ञान र तिनीहरूको प्रसारण नाफा–घाटा र पुँजीबजारको साँघुरो घेराभित्र बन्दी बनेका हुन्छन् । यस्ता ज्ञान र चिन्तनले आममानव जातिको विकासमा सहयोग गर्न सक्दैन । बजारको पहुँचभन्दा टाढा भएका व्यक्तिको सार्वजनिक र अन्य सेवासुविधा समान रूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार खोसिन्छ । गाउँघर छोडेर सहर पस्ने बाध्यता र सहर पसिसकेपछि रैथाने ज्ञान–चिन्तन बिर्सने वातावरण हाम्रा नवउदारवादी भाष्य र ज्ञानले निर्माण गरिदिएका छन् ।
नवउदारवादी ज्ञानमीमांसाले मानिस एउटा बजारिया वस्तु हो र उसले उत्पादन गर्ने हरेक चीज बजारमा बिक्नुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो दिमागमा भरिदिन्छ । बजारले स्वीकार नगरेका ज्ञान र सोच सीमान्तकृत हुन्छन् । विकासको सूचकांकमा यस्ता ज्ञान फिट हुँदैनन् र उनीहरूको कुनै मूल्य हुँदैन, जसले गर्दा कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य, व्यायाम, शिक्षा र समाज विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमि खेलेका हाम्रा परम्परागत ज्ञान ओझेलमा परेका छन् । अहिले गाउँतिर आफ्नै घरको ‘भकारी’ भर्नेभन्दा पनि बजार भर्ने उत्पादनमा जोड दिन थालिएको छ । छिट्टै नगद हात त पर्छ तर भकारी रित्ता हुन्छन् । बजारमुखी हुन थालेपछि खानेकुरा जोहो गर्ने परम्परागत रैथाने ज्ञान हराए । गुन्द्रुक, घ्यू, खानेतेल, अचार, सिन्की सबै बजारले दिनेभयो ।
ज्वरो, निमोनिया, घाँटी र जीउ दुख्दा प्रयोग गरिने जडीबुटी घरबारीतिर रोप्न छाडियो । हाम्रो जीवनशैली बजारमा निर्भर भयो । यो महामारीले यही जीवनशैली र योसँग जोडिएका ज्ञानलाई परिवर्तन गर्न सोच्ने दिन आएको कुरा संकेत गरेको छ ।
नवउदारवादले हामीसँग भएका रैथाने ज्ञानलाई अवमूल्यन गर्न त सिकायो नै, मुख्यगरीयसले हाम्रो क्षमता र सिर्जनशीलातालाई नाफा–घाटाको अंकगणितमा खुम्च्याइदियो । यसले हामीलाई ‘प्रतिस्पर्धा’को नाममा निर्मम व्यक्तिवादी र स्वार्थी बनाइदियो । शक्तिको स्रोत ‘नगद’ भएकाले यसलाई जति सक्यो उति थुपार्न सिकायो । तर, मानव स्वास्थ्य, सुख/समृद्धि नगदभन्दा माथि छ भन्ने तथ्यमाथि गम्न सिकाएन । नवउदारवादले खान र उपभोग गर्ने काइदा–काइदाका शैलीहरू सिकायो । तर, संरक्षण र उत्पादन गर्न कम सिकायो । रेस्टुरेन्टमा पसेर मेन्यु छानीछानी खान सिकायो तर आफ्नै घरमा पकाएर खान सिकाएन । संसार घुम्न र मनोरञ्जन गर्न सिकायो । तर, आफ्नै घर स्याहार्न सिकाएन । घर–जग्गा किन्न लगायो तर घर बस्ने समय दिएन ।कोरोनाभाइरसको महामारीसँग यही जीवनशैली र योसँग जोडिएका ज्ञानहरू जोडिएका छन् । यसको शक्ति कहिले निभ्छ, अहिले केही भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने यो भाइरसले हामीले मान्दै आएका विकास, जीवन र समाजसम्बधी ज्ञान र चिन्तनलाई प्रश्न गर्ने समय दिएको छ । तिमी एउटा बजारिया वस्तु मात्र होइनौ, तिमीसँग सोच्न, चिन्तन गर्न र सिर्जना गर्ने सक्ने क्षमता छ र त्यसको प्रदर्शन गर्ने बेला आयो भन्ने सन्देश आम मानवजातिलाई दिएको छ ।
यो महामारी ढिलो–चाँडो सकिन्छ नै । केही समयमा हाम्रो जीवन सामान्य पनि होला । तर, यसबाट केही पाठ नसिकी विगतजस्तै विस्मृतिमा गयौं भने हामी कुनै पनि प्रकोपसँग जुध्न सक्दैनौँ । यस्तो विस्मृतिले समाज विकास हुन सक्दैन । राज्य र आमनागरिकले यो महामारीबाट गहिरो पाठ सिक्नुपर्छ, जसले नवउदारवादी चिन्तन र ज्ञानलाई चुनौती दिन सकोस् र साँचो अर्थमा मानवर नागरिककेन्द्रित ज्ञानको निर्माण र तिनको प्रयोग राज्य संरचनामा देख्न सकियोस् । त्यस्तो ज्ञानले साँच्चिकै जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट राज्य सञ्चालन भएको महसुस गराओस् । राज्यले बजार निर्माण गरोस्, तर बजारले राज्य होइन । डेभिड हार्भी र नोम चोम्स्कीले भनेझैं अहिलेको महामारीले नवउदारवादी चिन्तन, यसले निर्माण गरेका संरचना र शासकीय अभ्यासमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब पनि विकास भनेको ठूला–ठूला भवन, फराकिला सडक र द्रुतगतिका यातायात मात्र हो भन्ने सोचियो र आममानवको जनजीविका र समग्र विकाससँग जोडिएका ज्ञानको खोजी र प्रयोग गरिएन भने भावी पुस्ताले यस्ता महामारी धेरै भोग्नुपर्नेछ ।
यसका लागि राज्यले नाफाभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा डेभिड हार्भीले भनेजस्तै एउटा नयाँ ज्ञान र चिन्तनबारे छलफल गर्नु जरुरी छ । उनका अनुसार, ‘समाजवादमा आधारित प्रजातन्त्र’ले मात्रै राज्यलाई जनतासँग जोड्न सक्छ र यस्ता किसिमका महामारीसँग लड्न सकिन्छ । यसका लागि समाज र नागरिकसँग जोडिएका मुद्दालाई ज्ञान निर्माण र राज्य सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नवउदारवादी भाष्य, ज्ञान र संरचनाले बेकामे, असान्दर्भिक र निम्छरो बनाएका नागरिक र तिनीहरूले निर्माण गर्ने ज्ञानहरूको (समाज विकास, मानवता, स्वास्थ्य आदिसँग सम्बन्धित) खोजी र प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । यसले हाम्रो आफ्नै ‘भकारी’लाई मजबुत बनाउँछ र बजारमाथिको परनिर्भरता घटाउँछ । हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन गरेको ‘समाजवादउन्मुख समाज’ यही हो । यो महामारीले यही दर्शनलाई सहयोग पुर्‍याउने चिन्तन, ज्ञान र संरचनाको निर्माण गर्ने अवसर दिएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ ०८:३८